सेयर बजार – Page5– Banking Khabar
सेयर बजारमा ६.४५ अंकको गिरावट, ४८ कम्पनीका सेयरधनीले कमाए
बैंकिङ खबर । सोमबार सेयरबजार ६.४५ अंकले घटेर १,१९१.७४ अंकमा कायम भएको छ । फाइनान्स, उत्पादनमुलक जीवन बीमा र अन्य बाहेक सबै उपसुचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै होटल समुह ३२.६६ अंकले घटेको छ । दिनभरिमा १६८ वटा कम्पनीको २२ …
एनएमबी बैंकका साधरणसभा पुस २६ गते, ३० प्रतिशत लाभांस सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
बैंकिङ खबर । एनएमबि बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि ३० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले दिने ३० प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन हो । पुस २६ गते वार्षिक साधारण सभा गर्ने बैंकले मंगलबार (पुस १० गते) …
युनिभर्सल पावर कम्पनीको २१ लाख कित्ता आईपिओ पुस १५ गतेदेखि
बैंकिङ खबर । युनिभर्सल पावर कम्पनीले पुस १५ गतेदेखि २१ लाख तीन सय ५० कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखा जिल्लाको गौरिशंकर, कालिञ्चोक, र विगु गाउँपालिकाका स्थानीयहरुका लागि सेयर जारी गर्न लागेको हो …
प्राइम बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
बैंकिङ खबर । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड लिमिटेडले १६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको पुस ५ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव अघि …
अधिकांश माग सम्बोधन भएपछि लगानीकर्ताले तोडे अनसन
बैंकिङ खबर । चार दिनदेखि आमरन अनसन बसेका लगानीकर्ताहरुले एक अर्कालाई पानी खुवाएर अनसन तोडेका छन् । पूँजीबजार बिस्तार र सुधारसहित अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै यो समूहले आन्दोलन थालेको लगानीकर्ता दबाब समूह ११ दिनदेखि अनसनमा थियो धने चार दिने देखि आमरन …
साताको अन्तिम दिन बढेर बन्द भयो सेयर बजार, कारोबार ४० करोडमाथि
बैंकिङ खबर । साताको अन्तिम दिन सेयर बजार ३.२८ अंकको वृद्धिसँगै ११६५.९७ अंकमा पुगेको छ । बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत्, निर्जिवन बीमा, लघुवित्त र जीवन बीमा समूह बढेका छन् भने व्यापार, होटल, फाइनान्स र अन्य समूह घटेका छन् । दिनभरिमा …
वाणिज्य बैंकहरुको लाभांश घोषणा : कुनको कति ?
बैंकिङ खबर । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिने भएका छन् । सबैभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेको छ भने सबैभन्दा कम घोषणा गर्ने सिटिजन्स बैंक रहेको छ । सानिमा बैंक …
काबेली विकास बैंकले ३५ प्रतिशत बोनस दिने, साधरणसभा पुस २८ गते
बैंकिङ खबर । काबेली विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ३५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको सो मात्राको बोनस दिने प्रस्ताव अघि सारेको हो । बैंक सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी …
एनआईसी एशिया बैंकको १०.५२६ लाभांश पारित
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई १०.५२६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । पौष ४ गतेका सम्पन्न २१ औं वार्षिक साधारण सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम १० प्रतिशत बोनस सेयर र नगद प्रयोजनका लागि समेत गरी …
सेयर बजार ५.४६ अंकले घट्यो, सबैभन्दा धेरै कावेली विकास बैंकका सेयरधनीले कमाए
बैंकिङ खबर । बुधवार सेयर बजार ५.४६ अंकले घटेर १,१६२.७० अंकमा कायम भएको छ । विकास बैंक, फाइनान्स, निर्जिवन बीमा कम्पनी र उत्पादनमुलक बाहेक सबै उप सुचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै जिवन बीमा समुह ३६.५६ अंकले घटेको छ । …
मेगा बैंकले ७.८५ प्रतिशत लाभांश दिने
बैंकिङ खबर । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले ७.८५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकको पुस ४ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले १.००२३३ प्रतिशत बोनस सेयर र ६.८५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । बैंकले कुल …
हिमालयन बैंकको लाभांश प्रस्ताव
बैंकिङ खबर । हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई १५.७८ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । पुस ३ गते मंगलबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको ३६४ औं बैंठकले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर र १०.७८ …
गण्डकी विकास बैंकको १४.२० प्रतिशत लाभांश स्वीकृत
बैंकिङ खबर । गण्डकी विकास बैंकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भई नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतीका लागि पेश भएको आ.व. २०७४/०७५ सम्मको संचित मुनाफाबाट चुक्ता पूजीको १४.२० प्रतिशत प्रस्तावित नगद लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छ । उक्त नगद लाभांश बैंकको …
लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीको सेयर विक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल नियुक्त
बैंकिङ खबर । लिवर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेड र एनआईविएल एस क्यापिटल लिमिटेड बीच सम्झौता भएको छ । साधारण शेयर जारी गर्न प्रवद्र्धक कम्पनी लिवर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेड र बिक्री प्रवन्धकमा साधारण शेयर निष्काशन सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा …
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, कारोबार ५३ करोड माथी
बैंकिङ खबर । मङगलबार सेयर बजार १४.६१ अंकले घटेर १,१६८.१७ अंकमा कायम भएको छ । उत्पादनमुलक र अन्य बाहेक सबै उपसुचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै निर्जिवन बीमा समुह १९२.३२ अंकले घटेको छ । दिनभरिमा १५९ वटा कम्पनीको १४ लाख …
Page5of 134« First...«34567 » 102030...Last »